Fomba 5 hanalavirana ny fanitsakitsaham-bady amin'ny fanambadiana | TOKO VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Fomba 5 hanalavirana ny fanitsakitsaham-bady amin'ny fanambadiana
Androany isika dia hiatrika fomba 5 hanalavirana ny fanitsakitsaham-bady ao amin'ny fanambadiana. Ao amin'ny Eksodosy 20:14 Aza mijangajanga. Fanitsakitsaham-bady dia fandikan-dalàna lehibe eo anatrehan'Andriamanitra Tsitoha. Andriamanitra dia mila fahamasinana, fanadiovana no tadiaviny ary izany no antony nanambarany fa tokony halavirina ny fanitsakitsaham-bady.
Nampisy olana tamin'ny ankohonany i Davida Mpanjaka rehefa nanitsakitsa-bady. Nataony tamin'ny vadin'i Oria mpanompony mahatoky izany. Ary nandry tamin'i Oria i Davida ary nitondra vohoka izy. Toy ny hoe tsy ampy izany, nasainy novonoina tany an-tsaha i Oria mba hanaronana ny fahotany. Ary Andriamanitra tsy nankasitraka an'i Davida noho ny zavatra nataony, ka dia maty ny zaza torontoronina, izay nanan'an'i Davida sy vadin'i Oria. Andriamanitra dia tsy maintsy namoaka ny voan'ny tsy fahamasinana.
Mpino maro no mahita fa sarotra be ny mifady ny fanitsakitsa-bady na dia mpitory na Mpivavaka mivavaka mafy aza. Indraindray isika dia manontany tena hoe nahoana no sarotra be ny miala amin'ny fanitsakitsaham-bady. Voalohany, tsy maintsy takatsika hoe nahoana Andriamanitra no nanome toromarika fa tsy tokony hijangajanga isika.
Maninona Andriamanitra no nilaza fa tsy hijangajanga
Manimba ny fikasan'Andriamanitra tany am-boalohany ho an'ny fanambadiana
Ny fanitsakitsaham-bady dia manimba ny fikasan'Andriamanitra tany am-boalohany ho amin'ny fanambadiana. Nilaza Andriamanitra fa tsy tsara ho an'ny lehilahy ny mijanona irery ka izany no nanaovan'Andriamanitra ny vehivavy tamin'ny lehilahy. Ny fikasan'Andriamanitra voajanahary dia ny hiarahan'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Tsy mahagaga raha milaza ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Genesisy 2:24 Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy ireo. Ny tanjon'ny firaisana dia ny hanaovana azy ao anatin'ny faritry ny fanambadiana. Ny firaisana ara-nofo rehetra any ivelan'ny fanambadiana dia fahotana ary ny tanjon'ny fanambadiana dia ny hiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy iray ary hamorona vatana iray.
Manimba fanambadiana ny fanitsakitsaham-bady
Manimba ny fanambadiana ny fanitsakitsaham-bady. Rehefa manitsakitsa-bady ny lehilahy na vehivavy dia hisy fiatraikany amin'ny fandehan'ny zavatra ao amin'ny fanambadiana izany. Ny mpiara-miasa aminy no hijaly izany ary hijaly amin'izany ny zanany. Misy fanekempihavanana supernatural izay mifamatotra amin'ny firaisana ara-nofo, mitondra fanoloran-tena sy firaisan-tsaina izany, izany no antony nanomezan'Andriamanitra torolalana fa tokony hatao ao anatin'ny faritry ny fanambadiana izany.
Ny fianakavian'i David mpanjaka dia nahatsapa ny hafanam-pon'ny fanitsakitsaham-bady taorian'ny nandry tamin'ny mpanjaka tamin'ny vadin'i Oria ary torontoronina anaka. Ary tonga tao an-tranon'ilay lehilahy atao hoe lehilahy araka ny fanjakan'Andriamanitra ny fahafatesana. Na teo aza i David nivavaka mafy tamin'Andriamanitra mba hitsimbina ny ain'ilay zaza, dia mbola nalain'Andriamanitra ihany ilay zaza. Manimba ny fiadanan'ny a ny fanitsakitsaham-bady family.
Ny fijejojejoana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra
Tian'Andriamanitra hialantsika izay rehetra tsy manome voninahitra ny anarany masina. Ny tanjon'ny fisiantsika dia ny fananana koinonia miaraka amin'Andriamanitra. Ny iray amin'ireo zavatra manapaka ny fantsom-pifandraisana misy eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra dia ny ota. Ny fanitsakitsaham-bady dia fahotana izay tsy ahamenan'ny fanahin'ny Andriamanitra noho izany antony izany no nanomezan'Andriamanitra torolàlana mba hialantsika amin'izany.
Tian'Andriamanitra hiroborobo isika amin'ireo zavatra izay manome voninahitra ny anarany masina irery. Rehefa miditra amin'ny fanitsakitsaham-bady isika dia manomboka manome anarana ratsy ny filazantsaran'i Kristy izay tsy dia tsara loatra.
Fomba dimy hanalavirana ny fijangajangana
Manana ny fahatahorana an'Andriamanitra
Ny soratra masina milaza fa ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Mila ny Fahendren'Andriamanitra isika hanalavirana ny fanitsakitsaham-bady. Haingana i Josefa nahafantatra ny fahatahorana ny Tompo ka izany no nanam-pahendrena nitsoahany. Ny bokin'ny Genesisy 39: 9 Tsy misy lehibe noho ity trano ity noho izaho, ary tsy nisy nafeniny ahy, afa-tsy ianao, satria vadiny ianao. Koa hataoko ahoana no hanao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra?
Takatr'i Josefa fa ny faharatsiana tadiaviny dia tsy ny an'ny lehibeny ihany fa ny fahotana amin'Andriamanitra. Ary satria natahotra an'Andriamanitra fatratra izy, dia afaka nisoroka tsy handry amin'ny vadin'ny tompony.
Fantaro hoe rahoviana no handositra
Mbola momba ny fahendrena izany. Milaza ny soratra masina fa mahasoa ny mpitondra ny fahendrena. Tsy tokony hiandry handroaka sy hamatotra demonia tsy hitanao ianao rehefa alaim-panahy hiditra amin'ny vehivavy hafa izay tsy vadinao. Na dia mivavaka be aza ianao dia tsy maintsy fantatrao ihany koa ny fotoana handosiranao fa tsy hitodika any aoriana intsony.
Afaka nandresy ny fakam-panahy i Josefa ny nandry tamin'ny vadin'ny tompony, tsy noho izy natahotra an'Andriamanitra fotsiny, fa satria fantany hoe rahoviana no tokony hihazakazaka. Tokony ho fantatrao ny fotoana mety amin'ny hazakazaka ary aza miherika intsony rehefa tonga ny fakam-panahy. Nianjera tamin'ny fakam-panahy i David Mpanjaka satria nijery be izy ary tsy fantany hoe rahoviana no handositra. Tsy ilaina ny mandroaka sy mamehy demonia, ny vahaolana dia mitoetra ao aminao ny fotoana mety indrindra hihazakazahana ary aza miherika intsony.
Halalino ny Tenin'Andriamanitra ary mivavaha
Ny ampahany amin'ny vavaky ny tompo dia milaza fa tsy mitondra antsika amin'ny fakam-panahy fa manafaka antsika amin'ny ratsy rehetra. Tsy maintsy mijery sy mivavaka ianao. Ny soratra masina milaza fa ny tenin'ny Tompo dia jiro amin'ny tongotro sy fanazavana ny lalako. Rehefa mandalina ny tenin'Andriamanitra isika dia mahazo fahatakarana tsara kokoa hoe iza marina Andriamanitra ary inona ny tsy Izy.
Na dia mivavaka amin'Andriamanitra aza isika dia tsy maintsy mangataka mba tsy ho voatarika amin'ny fakam-panahy izay ho lehibe kokoa noho izay azontsika.
Tiavo ny vady malalanao
Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny fanitsakitsaham-bady dia ny tsy fitiavana. Rehefa avy nanome ny didy 10 Andriamanitra rehefa tonga i Kristy dia nanontaniana izy hoe iza amin'ireo didy ireo no tena izy ary manan-danja indrindra, hoy i Kristy fa ny fitiavana.
Rehefa tia ny mpiara-belona aminao tahaka ny fiainanao ianao dia tsy te hanao zavatra hizaha toetra ny vadinao. Ny fitiavana dia hahatonga anao hanolo-tena amin'ny sendika, rehefa tonga amin'ny fatra ny fanoloran-tenanao dia lasa sarotra aminao ny miaraka amin'ny vehivavy na lehilahy hafa.
Miresaha fanampiana amin'ny olona iray
Iray amin'ireo olana atrehin'ireo mpino ny fieritreretana fa tsy mila fanampiana avy amin'olona. Eny, azonao atao ny manao ny zavatra rehetra amin'ny alàlan'i Kristy izay manatanjaka anao, na izany aza, ny fanangonana ireo rahalahy dia tsy tokony hafoina koa. Rehefa manomboka mihalehibe ao am-ponao ny fakam-panahy amin'ny fanitsakitsaham-bady, aza misintona fotsiny na miatrika izany fahatsapana irery izany dia tokony hiezaka ny hiteny amin'ny olona ianao mba hahafantaranao izay ratsy.
Indraindray ianao dia mety mila miresaka amin'ny pasiteranao na mpanolotsainao. Izy ireo dia afaka manampy anao handresy ny fanahin'ny fanitsakitsaham-bady.
Previous lahatsoratraAndinin-tsoratra masina 10 hanombohana ny andronao
Next lahatsoratraFomba 5 hanalavirana ny fijangajangana ho mpitovo
Antony 5 iainantsika fakampanahy
Natty Onumara anao 16 jona 2021 Amin'ny 2:25 hariva
Misaotra betsaka amin'ny fahalalanao tsara momba ny fanitsakitsaham-bady. Mivavaka aho mba hanafahana ireo voakasik'izany amin'ny Anaran'i Jesosy Mahery.
Vavaka amin'ny fanafahana mahery vaika
Doka am-bavaka 50 manohitra ny ody amin'ny tokantrano
Desambra 13, 2018
Teboka vavaka hanoherana ny fikasan-dratsin'ny olona